कांग्रेससँग तालमेल गर्दा राजपा र फोरम नेपाललाई कति फाइदा, कति बेफाइदा ? | Capital Khabar ::
गृह देश कांग्रेससँग तालमेल गर्दा राजपा र फोरम नेपाललाई कति फाइदा, कति बेफाइदा ?
कांग्रेससँग तालमेल गर्दा राजपा र फोरम नेपाललाई कति फाइदा, कति बेफाइदा ?
काठमाडौं–नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा बन्न लागेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग तालमेल गर्दा फाइदा–बेफाइदा के हुन्छ भनि मधेशी गठबन्धन (राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम)ले हिसाब किताब गर्न थालेकाे छ ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालबीच बाम गठबन्धन बनेपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन हौसिएका दलहरु सीटको जोड घटाउमा अल्झेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले संयुक्त रुपमा माग गरेको सीट संख्या हेर्दा ती दलहरुले चुनावी तालमेल गर्न नचाहेको काँग्रेस नेताहरुको आरोप छ ।
राजपा नेपाल र फोरम नेपालको मधेशी गठबन्धनका नेताहरु कांग्रेससँग तालमेल नगर्दा नै आफूहरुलाई फाइदा हुने बताउँछन् ।
दुई नम्बरमा आफ्नो राम्रो संगठन रहेको दाबीसहित राजपा–फोरमले बढी सीट माग गरेकाे छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा मधेशवादी दलले ल्याएको नतिजाको हिसाब गर्ने भने दुई नम्बर बाहेक अन्य प्रदेशहरुमा खासै राम्रो परिणाम आएको छैन ।
फोरम नेपालले २ नम्बर प्रदेशबाहेकको बाँकी छ प्रदेशमा चुनाव लड्दा ८ तह जितेको थियो भने राजपा नेपालले चुनावमा भाग नै लिएन ।
छवटा प्रदेशको ६१७ स्थानीय तहमध्ये फोरम नेपालले आठवटा तह मात्र जित्नु धेरै कम हो । दुई नम्बर प्रदेशबाहेक अरु प्रदेशमा फोरम नेपालले थोरै सीट ल्याउनु र राजपा नेपालले भागै नलिनेले पुष्टि हुन्छ कि उनीहरुको जनाधार भनेको दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र हो ।
दुई नम्बर प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसले ४० तह जितेको छ भने फोरम नेपालले २६ र राजपा नेपालले २५ गरि मधेशी गठबन्धनले ५१ तह जितेको छ । यो काँग्रेसभन्दा ११ तह बढी हो ।
मधेशी गठबन्धनले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा विना लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि चुनावमा भाग लिँदा पनि काँग्रेसभन्दा बढी सीट ल्याउने देखिन्छ भनि राजपा र फोरमले हिसाब निकालेर बसेको बताइन्छ । त्यही भएर २ नम्बर प्रदेशमा रहेका ३२ प्रतिनिधिसभा सीटमध्ये २४ सीट ती दलहरुले माग गरेका छन् ।
राजपा नेपालका एक नेताले भने, ‘तालमेलमा हामीले यति मागेका हौं । यसमा सबै जितिन्छ भन्ने पनि छैन । हामीले काँग्रेसँग तालमेल नगरेपनि मधेशमा १५–२० सीट जित्छौ ।’
१ नम्बर प्रदेशका मोरङ, सुनसरी र पाँच नम्बर प्रदेशका कपिलवस्तु, नवलपरासी र रुपेन्दहीमा समेत काँग्रेससँग तालमेल नगरे पनि केही केही सीट जित्ने उनीहरुको दावी छ ।
मधेशी गठबन्धनको हिसाबमा एमाले – माओवादी बाम गठबन्धनले मधेशमा राजमार्ग वरिपरीका क्षेत्रहरु जित्छ भने काँग्रेसको मत तल रहेको छ । यदि राजपा नेपाल र फोरम नेपाल मिलेर चुनाव लडे काँग्रेसको प्रायः मत काटिने उनीहरुको आँकलन छ ।
त्यसैले काँग्रेसलाई मधेशमा यो हिसाब देखाएर मधेशी गठबन्धनले काँग्रेसँग ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको बुझिएको छ । र, यो हिसाबले काँग्रेस पनि तर्सेको छ । काँग्रेसको आधार क्षेत्र भनेको मधेश प्रदेश नै हो । काँग्रेको भोट बैंक मधेशमा रहेको कारण काँग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
राजपा नेपाल र फोरम नेपालले देशैभरिबाट ५५ सीट मागेको छ । १६५ प्रतिनिधिसभाको सीटमध्ये मधेशवादी दललाई नै ५५ वटा सीट दिए काँग्रेस आफै के लिने, लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) लाई के दिने ? भनि मधेशी गठबन्धन (राजपा र फोरम) सँग काँग्रेसले जिज्ञासा राखेको छ ।
गठबन्धनले एक नम्बर प्रदेशमा १० सीट मागेको छ । यस्तै उपत्यकासहितको तीन नम्बर प्रदेशमा पाँचवटा सीट माग गरेको छ । अन्य प्रदेशमा एक दुई सिट मात्र माग गरेको छ ।
स्मरण सहोस् जहाँ कांग्रेसकोप्रभाव रहेको छ त्यहाँ राजपाको पनि प्रभाव रहेको छ । यसरी जहाँ काँग्रेसको आधार रहेको छ, त्यहाँ मधेशवादी दलले बढी सीट माग गरि दिएपछि काँग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको छ । ५५ सीट माग्नेमा बढी जोड उपेन्द्र यादवको रहेको छ । उनले आफ्नो दलको देशैभरि संगठन रहेको भन्दै यति सीट माग गरेको बताइन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले मधेशवादी दलले देशैभरि आफ्नो संगठन बनाउन चाहँदा काँग्रेससँग तालमेल गरिए त्यो उसको लागि फाइदा हुने बताए ।
उनले भने, ‘मधेशवादी दलले देशैभरि आफ्नो संगठन बनाउन चाहेको हो भने मिलेर निर्वाचनमा जाँदा फाइदा हुन्छ । यदि दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र बस्न चाहन्छ भने काँग्रेससँग तालमेल गर्दा घाटा लाग्नेछ ।’
उनले थपे, ‘एक नम्बर र पाँच नम्बरमा काँग्रेससँग तालमेल गर्दा मधेशवादी दललाई फाइदा हुने देखिन्छ । एक नम्बरमा मधेशका जिल्लाहरु भएपनि त्यहाँ मधेशवादी दलको जित्ने अवस्था छैन । पाँच नम्बर प्रदेशमा मधेशवादी दलको राम्रो थियो तर केही वरिष्ठ नेताहरु अन्य दलमा गएको कारण त्यहाँ पनि अवस्था राम्रो छैन, त्यहाँ पनि काँग्रेस नै काम लाग्छ ।’
नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका एक नेताले भने, ‘फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कुरा सुन्दा उनले लोकतान्त्रिक गठबन्धनचाहेको देखिदैन ।’
‘राजपा नेपालभन्दा फोरम नेपालले सीटमा बढी दावी गरेको देखिन्छ । यदि यो गठबन्धन बनेन भने त्यसको कारण फोरम नेपाल हुनसक्छ’, ती नेताले थपे ।
राजपा नेपालले केहि लचक बनेर भएपनि तालमेल गरेर चाहेको बताइएपनि फोरम नेपालले अलि बार्गेनिङ्ग गरिरहेको नेताहरु बताउँछन् ।
अघिल्लो लेखमागठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँड कस्तो हुँदैछ ?
अर्को लेखमाआज संसदको अन्तिम बैठक : अब संसद स्वत विघटन